PressReader - Ilanga: 2018-07-12 - BAXEBULA UMKHOMA NGESIKOLE ESINGUMBOMBAYI
BAXEBULA UMKHOMA NGESIKOLE ESINGUMBOMBAYI
Kuthiwa sekuphele iminyaka sithola isabelomali
Ilanga - 2018-07-12 - Front Page - SKHOSIPHI MTHEMBU noMTHOBISI SITHOLE NGA mthobisis@ilanganews.co.za skhom@ilanganews.co.za
SEKUQUBUKE izinsolo ezishaqisayo KwaNongoma emuva kokuvela kwehlazo “lesikole” esiwumbombayi okuthiwa sithola isabelomali minyaka yonke.
Kubikwa ukuthi ingaphezulu kwewu-5 iminyaka lesi sikole okuthiwa yiNongoma Finishing sithola isabelomali yize sesavalwa. Kuthiwa bekuhloswe ngaso ukuba kufunde izingane ezisuke zifeyile umatikuletsheni. Ngenxa yokuthi besingakakhiwa, kubikwa ukuthi sincikiswe KwaGqikazi FET.
Ngo-2011, kuthiwa lesi sikole sivaliwe kwathathwa othisha nothishanhloko baso bayiswa kwezinye izikole. Umthombo weLA
uthi kuvela ukuthi lesi sikole besisebenza kusukela ngowezi-2011, kuze kube yimanje.
Uthi kuvele ukuthi sithola isabelomali minyaka yonke kanti kuthiwa sinothisha abawu-9 ngokwamaphepha, yisigungu esilawula isikole, izinhloko ezintathu zezifundo ezithile nabafundi abawu-376 - konke lokhu okungekho.
“Leli yihlazo eliyisimanga, kuvela ukuthi lesi sikole siyasebenza ekubeni konke okuphathelene naso kwavalwa ngo-2011 emuva kokuba kuphakanyiswe ukuba izingane eziqedela neziphinda umatikuletsheni zisebenzise iKwaGqikazi.
“NgoMfumfu (October) wangonyaka odlule, kuputshuke izindaba ezithi lesi sikole sisasebenza. Lokhu kuvele emuva kokuba kukhangiswe isikhala somsebenzi, kufunwa uthisha weMaths kusona lesi sikole. Kudide abantu abaningi lokhu ngoba bekwaziwa ukuthi isikole sesavalwa. Kuthe ngoNhlolanja (February) kulo nyaka, kwatholakala ukuthi lokhu kuliqiniso futhi siyavela nasemnyangweni ukuthi sikhona lesi sikole, yize sesavalwa,” kusho umthombo.
Uthi kube nomhlangano ngoNhlolanja lapho bekuyobikelwa khona umqondisi womnyango wezemfundo esifundeni saseZululand ngalolu daba. Uthi umqondisi uthembise ukuluphenya lolu daba kodwa namanje kusathulekile.
Kuvele nokuthi kulesi sikole kunabantu abanikwa umsebenzi wokuphakela izingane, abalungisa isikole neminye nje imisebenzi.
“Imali idliwa emini ilanga libalele, konke lokhu kuveza ngokusobala ukuthi kunabantu abathola le mali minyaka yonke, okungaziwa ukuthi ngobani. Uma ungabala kusukela kuvalwa lesi sikole ngo-2011, sekuchithwe izizumbulu zikhokhelwa isikole esingekho.
“Umnyango sifuna uluphenye lolu daba kuze kuvele abantu abenza lokhu,” kusho umthombo.
ISekela-mengameli leNational Teachers' Union (Natu), uMnu Allen Thompson, lithi lolu daba bayalwazi, lwabikwa kubona njengenyunyana.
“Empeleni ziningi izikole ezingekho kodwa zinakho konke ezikudingayo. Ngezinye zezinto esisalwa nazo kodwa okwamanje ngeke siphawule kakhulu,” kusho uMnu Thompson.
UNobhala weSouth African Democratic Teachers' Union (Sadtu) KwaZulu-Natal, uNkz Nomarashiya Caluza, akatholakalanga ocingweni kanti uMengameli we-Educators Union of South Africa (EUSA) uMnu Scelo Bhengu, uthe basazolubheka lolu daba.
UMnu Kwazi Mthethwa okhulumela uNgqongqoshe wezeMfundo KwaZulu-Natal, uthe bazolubheka lolu daba.
“Uma kuyiqiniso ngampela, ngabe kusho ukuthi wubugebengu obuseqophelweni eliphezulu lobu. Njengoba siwumnyango ofuna ukusebenza ngobuqotho nokuthembeka, sizosondela eduze siyiphenye le nto,” kusho uMnu Mthethwa.
Umnyango sifuna uluphenye lolu daba ukuze kuvele abantu abenza lokhu.
ISITHOMBE NGABE: ISASA
UMNYANGO wezeMfundo KwaZulu-Natal uthi uzophenya ngezinsolo zesikole okuthiwa siwumbombayi.